teknolojia fananganana induction teknolojia famerenana PDF download
Famerenan'ny teknolojia fanorana
IH rehetra (fanorana fanalefahana) Ny rafitra ampiharina dia novolavolaina tamin'ny fampiasan'ny elektromagnetika izay fahitan'i Michael Faraday voalohany tamin'ny 1831. Ny famatsian-drano arak'asa elektromagnetika dia miresaka momba ny fihanaky ny herin'ny herinaratra ao anaty faritra mihidy amin'ny alàlan'ny fihenan'ny lozam-pifamoivoizana iray hafa eo akaikiny. Ny fitsipiky ny famindrana ny induction, izay endrika ampiharina amin'ny fahitan'i Faraday, dia ny hoe ny AC ankehitriny izay mivezivezy amin'ny alàlan'ny faritra iray dia misy fiantraikany amin'ny hetsika magnetika an'ny fizaram-paritra faharoa izay eo akaikiny. Ny fiovaovan'ny ankehitriny ao anatin'ny faritra circuit dia nanome ny valiny hoe ny fomba niteraka ny zava-miafina ao amin'ny faritra faharoa manodidina. Ny fahitan'i Faraday dia nahatonga ny fivoaran'ny motera herinaratra, mpamokatra, mpanova, ary fitaovana finday tsy misy alàlan'ny fifandraisana. Na izany aza, ny fampiharana azy dia tsy nisy fiantraikany. Ny fahaverezan'ny hafanana, izay mitranga mandritra ny ny fametrahana fanorana induction, dia aretin'andoha lehibe iray manelingelina ny fiasan'ny rafitra iray manontolo. Ny mpikaroka dia nitady hanamaivana ny hafanana amin'ny alàlan'ny fanandramana ny habakabaka izay napetraka tao anaty motera na mpanova. Ny Lalàn'i Faraday dia narahin'ny fisehoana fampahalalana mandroso kokoa toa ny Lalàn'i Lentz. Ity lalàna ity dia manazava ny zava-misy fa ny fandehanana ankehitriny dia mihodina mankany amin'ny fiovan'ny hetsika magnetic induction.
Ny fahaverezan'ny hafanana, mitranga amin'ny fizotry ny fitaovam-panatanjahantena elektrika dia azo avadika ho angovo hafanana amin'ny herinaratra rafitra fanamorana ny induction amin'ny fampiharana ity lalàna ity. Indostria maro no nahazo tombony tamin'ity fahombiazana vaovao ity tamin'ny alàlan'ny fampiharana ny fanafanana fampidirana ho an'ny fatana, famonoana olona ary ny fanamafisana. Amin'ireto fampiharana ireto dia nanamora kokoa ny fametrahana ny masontsivana fanamafisana raha tsy misy loharanom-pahefana ivelany fanampiny. Io dia mampihena be ny fahaverezan'ny hafanana ary mitazona tontolo iasana mety kokoa. Ny tsy fisian'ny fifandraisana ara-batana amin'ny fitaovana fanamafisana dia manakana ny lozam-pifamoivoizana tsy mahafinaritra. Ny haavon'ny angovo avo lenta dia azo avy amin'ny famokarana angovo hafanana ampy ao anatin'ny fotoana fohy ……
Sokajy Induction Heating PDF Tags fiverenan'ny hafanana avo pdf, mpamahana avona pdf, Fitaovana fampidirana fanamafisana pdf, Fitaovana fampangatsiahana pdf, milina fampangatsiahana fananganana pdf, fananganana induction pdf, herinaratra famahana herinaratra pdf, rafi-panafody indostrialy pdf, teknolojia fanorana indostrialy pdf, pdf amin'ny fanafanana fanabeazana Post Fikarohana